भ्वाइस खोजीका लागि साइट अप्टिमाइजेसन चेकलिस्ट - Semalt बाट गोप्यता
टाढासम्म, आवाज खोजी एक प्रवृति हो जुन गति बढ्दैछ। पश्चिमी एसईओ विशेषज्ञहरु जोर दिन्छन् कि मोबाइल उपकरणहरु बाट भ्वाइस खोजीको हिस्सा २०% छ, र अर्को बर्ष सम्म यो संख्या 50०% सम्म बढ्ने छ।
तथ्या .्कहरूको बाबजुद पनि, यो स्पष्ट छ कि एक व्यक्तिको लागि मौखिक संचार बाह्य विश्वसँग अन्तर्क्रियाको मुख्य र प्राथमिकता तरीका हो। हामीलाई प्रश्नहरूको उत्तर भेट्न मन पर्छ। अर्को खोजी किन भ्वाइस खोजी अधिक लोकप्रिय हुँदै गएको छ गति हो। सबै पछि, सोध्नु एक पाठ क्वेरी प्रविष्टि भन्दा छिटो छ। यो पनि ध्यानमा राख्नुहोस् कि आवाज खोजी अक्षमताका लागि अधिक सहज छ।
तसर्थ, यो सुनिश्चित गर्न उच्च समय छ कि गुगल होम, सिरी, वा पश्चिम अलेक्सिकोमा लोकप्रिय तपाईंको साइटको सामग्री प्रतिस्पर्धीहरूलाई मन पर्छ। र यो नबिर्सनुहोस् कि qu 35% आवाज प्रश्नहरू "स्मार्ट स्पिकरहरू" बाट आएका हुन्, जसको कुनै स्क्रिन छैन, र जसले प्लेब्याकको लागि १० सबैभन्दा सम्बन्धित खोजी परिणामहरू मध्ये एउटा छनौट गर्दछ।
खोज्नुहोस् तपाइँको वेबसाइटको प्रचार गर्नको लागि Semalt सेवाहरू
आवाज प्रश्नहरूका लागि तपाईंलाई किन वेबसाइट अप्टिमाइजेसन चाहिन्छ?
Com स्कोर विश्लेषकहरूका अनुसार, २०२० खोजको आधा भन्दा बढी खोजी आवाज खोजी प्रयोग गरी गरिएको थियो। २०१० को सुरूमा, एडोबले एउटा अध्ययन सञ्चालन गर्‍यो र पत्ता लगायो कि users 44% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू हरेक दिन उनीहरूको आवाज प्रयोग गर्दै खोजी गर्दछन्। एसईओ कार्यको क्रममा, यो दिशाको लागि साइटलाई अनुकूलन गर्न महत्वपूर्ण छ।
विश्लेषकहरूको पूर्वानुमानका अनुसार २०२२ सम्ममा बेलायतमा मात्र आवाज प्रश्नहरूबाट राजस्व 3.5. billion अरब पाउन्ड हुनेछ, र अमेरिकी बजारले बढि billion० अर्ब डलर कमाउनेछ, र यो खोजीबाट भैरहेको आवाजका प्रश्नहरूका लागि मात्र धन्यवाद हो!
अ -्ग्रेजी भाषा बोल्ने ईन्टरनेटले भ्वाईस खोजीका लागि वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको उच्च महत्त्वको कदर गरिसक्यो। रननेटमा भ्वाइस क्वेरीहरूको लागि खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन प्राथमिकता होइन, यान्डेक्स तथ्या .्कका अनुसार devices२% मोबाइल उपकरणहरूबाट प्रश्नहरूको साझेदारी पार भयो। भ्वाइस खोजीको लोकप्रियतामा प्रक्षेपित विकासको आधारमा, हामी विश्वासका साथ खोज परिणामहरूमा गम्भीर प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गर्न सक्छौं प्रयोगकर्ताहरूका लागि जसले क्वेरी टाइप गर्ने यस विधिलाई रोजेका छन्।
भ्वाइस खोजी स्थानीय व्यापार र सेवा साइटहरूको लागि आवश्यक छ। मोबाइल सामग्रीको विचित्रता भनेको मोबाइलमा डेलिभरी प्रयोगकर्ताको वर्तमान स्थानमा केन्द्रित छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंलाई नजिक टायर सेवा फेला पार्न आवश्यक छ, भने अनुरोध द्वारा: "ठीक छ, गुगल! टायर फिटिंग", ठेगानाहरू र रेटिंग्सको साथ नजिकको पोइन्टहरू देखाइनेछ।
आवाज खोजीमा प्रतिस्पर्धा अब उच्च छैन, त्यहाँ धेरै लक्षित ट्राफिक छ, जुन एसईओको लागि धेरै मूल्यवान छ, तर केही व्यवसाय मालिकहरूले यसमा ध्यान दिए।
ब्राइटलोकल तथ्या .्कका अनुसार, स्थानीय व्यापार खोजिरहेका २ who% प्रयोगकर्ताले फोन कल मन पराउँछन्, १%% सिधा सेवाको ठाउँमा जान्छन् र २ 27% साइटमा जान्छन्।
चाहे तपाइँ एसईओ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा प्रासंगिक विज्ञापन अभियान चलाइरहनुभएको छ, यसले केही फरक पार्दैन। खोजी परिणामहरूले भ्वाइस खोजीको लागि परिणामहरू अनुकूलन गर्दै छन् र यो अधिक र अधिक हुँदै गइरहेको छ। यो समय हो तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्न सुरु गर्नु अघि प्रतिस्पर्धीहरूले यो शुरू गर्नु अघि।
प्रतिस्पर्धा भविष्यमा मात्र तीव्र हुनेछ, त्यसैले यो आवाज खोजीको लागि तपाइँको साइटलाई अनुकूलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यो गर्नका लागि तल चेकलिस्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
१. क्लासिक एसईओ
क्लासिक एसईओ को क्याननका अनुसार अनुकूलित साइटहरू भ्वाईस एसिस्टन्सको वातावरणमा स्तर निर्धारणको लागि पहिले नै एक विशाल आधार हो। त्यसकारण, प्राथमिक कार्य भनेको साइटलाई खोज ईन्जिनको आवश्यकता अनुरूप राख्नु हो। राम्रो नेभिगेसन, सान्दर्भिक मेटाडेटा, डोमेन प्राधिकरण, प्राविधिक त्रुटिहरूको अभाव, र एसईओको अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूले तपाईंलाई भ्वाइस खोजीमा रैंकिंगको लडाई जित्न मद्दत गर्दछ।
२. साइट लोड गर्ने गति
परम्परागत एसईओ को यस तत्व आवाज खोजी मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। ब्याकलिन्कोको एक अध्ययन अनुसार, साइट लोड गति आवाज खोजी को क्रम मा एक ठूलो भूमिका खेल्छ। धेरै जसो सम्भवतः कृत्रिम बुद्धिमत्ताले प्राय: साइटहरू छनौट गर्दछ जुन द्रुत रूपमा लोड हुन्छ तत्काल प्रतिक्रियाको लागि प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न। यो आवाज खोजबाट औसत पृष्ठ लोड वेगबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, जुन नियमित खोजको पृष्ठसँग तुलनामा २ गुणा छिटो हुन्छ।
Site. साइट सुरक्षा
हामी यसलाई छुट्टै वस्तुको रूपमा हाइलाइट गर्दछौं किनकि गुगल भ्वाइस खोजी परिणामहरूको मुख्य विशेषता सुरक्षित एचटीटीपीएस प्रोटोकल हो (HTTPS मा विश्लेषण गरिएका सबै पृष्ठहरूको 70०%)। यस्तो सहकार्य गूगल सर्च ईन्जिनको शीर्षमा देखिन्छ जब त्यहाँ एचटीटीपीएस प्रोटोकलको साथ साइटहरू छन्, र (ध्यान!) भ्वाइस खोजी परिणामहरूको लगभग% 75% नियमित खोजको लागि शीर्ष-3 मा छन्।
जे भए पनि, यो HTTP परिवर्तन गर्न अनावश्यक हुनेछैन।
Do. डोमेन प्राधिकरण
गुगलको क्रॉलरहरूमा समान, एआईले कडा लिंक मासको साथ साइट रुचाउँछ। प्रमाण उच्च आवाज रैंकिंग हो (re 75 भन्दा बढी Ahrefs द्वारा) सबै आवाज खोजी परिणामहरूमा।
नियमित खोज परिणामहरू जस्तो नभई हामी १० लि links्कबाट छनौट गर्दछौं, गुगल होमलाई केवल एक उत्तर प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ। यसको मतलव यो छ कि खोजी ईन्जिनले कुनै साइटको बारेमा सुझाव दिनेछ जुन उनी बारे अत्यधिक विश्वास छ।
खैर, पछिल्लो अनुसन्धानका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पृष्ठको लिंकको वजनको ख्याल राख्दैन जहाँबाट उत्तर आउँदछ। मुख्य कुरा यो डोमेनको लि power्क पावर हो।
St. संरचित डाटा मार्कअप
एक विवादास्पद बिन्दु, किनकि ट्याग संरचित डेटासहित भ्वाइस खोजी र साइटहरू बीच कुनै ठोस सम्बन्ध छैन।
कम्तिमा दुई कारणका लागि यो थप्न लायक छ।
यो रोबोटहरूलाई पृष्ठको बारेमा बुझ्नको लागि मद्दत गर्ने उत्तम अवसर हो। यस प्रकार, रोबोटहरूले निश्चित सेटहरूको क्यारेक्टरको वास्तविक अर्थ के हो र दिइएको अनुरोधका लागि पृष्ठको प्रासंगिकता छिटो र अधिक सही रूपमा निर्धारण गर्दछ।
गुगलले भर्खर Speakable नामक मार्कअपको नयाँ प्रकारको घोषणा गर्‍यो, विशेष गरी पृष्ठको अंशहरू संकेत गर्न डिजाइन गरिएको जुन आवाज सहायकहरूद्वारा पढ्न सकिन्छ। स्प्याकेबल मार्कअप अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूका लागि अ Home्ग्रेजी गुगल गृह उपकरणहरू, साथै गुगल समाचार प्रकाशकहरू जसले अ in्ग्रेजीमा सामग्री प्रकाशित गर्छन् उपलब्ध छ। गुगलले यस मार्कअपलाई अन्य देशहरू र भाषाहरूको लागि रोलआउट गर्ने बित्तिकै प्रकाशकहरूले स्पिक्वेबल सक्रिय रूपले सक्रिय रूपले प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ।
जबकि परम्परागत रूपमा संरचित डाटा मार्कअप भ्वाइस खोजीमा एक शक्तिशाली रैंकिंग कारक नहुन सक्छ, गुगलले पहिले नै विशेष मार्कअप प्रदान गर्दछ। यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्
हामीले प्राविधिक पक्षहरूसँग समाप्त गरेका छौं, र भोल्युसनहरूमा बढौं जुन सीधा आवाज खोजीसँग सम्बन्धित छ।
Semalt द्वारा प्रस्ताव गरिएका सेवाहरूको साथ खोजी परिणामहरूको शीर्षमा तपाइँको साइट अवस्थित गर्नुहोस्
दिइएको छ कि भ्वाइस टेक्नोलोजीका साथ खोजी प्रश्नहरू बोलिएको भाषासँग परिचित एक प्रश्न निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ, यो प्रस्ट छ कि हामीले यसमा निर्माण गर्नु पर्छ। हामी प्रयोगकर्ताको प्रश्नलाई जति सुस्पष्ट जवाफ दिन्छौं, उत्तर यस्तो छ कि उत्तर भ्वाइस खोजी परिणामहरूमा समावेश हुनेछ।
FAQ पृष्ठहरू यसका लागि उपयुक्त छन्। खोजी ईन्जिनले संकेत गरेको उत्तर स्रोतहरूमा आधारित - २.6868% आवाज परिणामहरू FAQ पृष्ठहरूबाट प्राप्त भएका थिए। प्रयोगकर्तालाई उत्पादन वा सेवाको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी उपलब्ध गराउनुको अतिरिक्त FAQ पृष्ठले आवाज खोजीहरूको लागि उपयुक्त ढाँचा कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउँदछ। उही समयमा, यदि कुनै अन्य पृष्ठमा प्रयोगकर्ताको प्रश्नको सही जवाफ छ भने, यो पनि इष्टतम परिणामको रूपमा चयन गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भको लागि: भ्वाइस खोजीको मामलामा, मुख्य वाक्यांशको लागि छुट्टै अवतरण सिर्जना गर्नु सम्भव छैन। ब्याकलिंकको अनुसन्धानका अनुसार आवाज खोजी परिणामहरूको सानो अंशले शीर्षकमा प्रासंगिक कुञ्जी शव्द समावेश गर्दछ। अधिक सम्भावना, कृत्रिम बुद्धिमता पृष्ठको सामग्रीमा आवश्यक जानकारी फेला पार्छ।
Long. लामो पुच्छल कुञ्जी शब्दहरू
लामो खोजशब्दहरू आवाज खोजीका साथ बढी प्रभावकारी छन्। जब व्यक्तिहरू उनीहरूको आवाजसँग खोजी गर्दछन्, उनीहरूले सोध्ने प्रश्न पाठित प्रश्न भन्दा //4 लामो छ। तल रेखा स्पष्ट छ - किवर्ड वाक्यांश लामो, सम्भावना धेरै भ्वाइस क्वेरीसँग।
त्यसकारण, लामो प्रश्न वाक्यांश वरिपरि तपाईंको सामग्री रणनीति बनाउनुहोस्।
Answer. उत्तर लम्बाई
जहाँसम्म प्रश्न वाक्यांश लामो हुनुपर्छ, उत्तर छोटो र अर्थपूर्ण लेख्नुपर्नेछ। गुगलले स्पष्ट गर्‍यो कि आवाज खोजीमा संक्षिप्त उत्तरहरू चाहिन्छ। यसका लागि खोजी ईन्जिनले भ्वाईस खोजीमा म्यानुअल पनि प्रदान गर्‍यो। यसबाहेक, अध्ययनको क्रममा, यो पत्ता लाग्यो कि खोजी भ्वाइस क्वेरीको जवाफको इष्टतम मात्रा २ words शब्द हो।
Read। पाठको पठनीयता
सजीलो-पढ्न सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ताको एक मुख्य फाइदाहरू हो। कारण सतहमा छ - सजीलो गर्न को लागी पाठ पुन: उत्पादन गर्न सजिलो छ। थप, यसले भ्वाइस खोजी एल्गोरिथ्मको लागि सामग्री बुझाउने बनाउँदछ जुन बुझ्न सजिलो छ।
साइटमा पाठ थप्दा, ध्यानमा राख्नुहोस् कि सूचना कानद्वारा पुनः उत्पन्न हुने छ - प्रयोगकर्ताहरूको ख्याल राख्नुहोस्। कुनै अनलाइन सेवा प्रयोग गरेर पाठको गुणवत्ता जाँच गर्नुहोस्।
१०. उत्तरहरू वा विशेष स्निपेटहरूको साथ ब्लकहरू
उत्तर ब्लकहरू कार्बनिक खोज परिणामहरूको एकदम शीर्षमा "शून्य स्थिति" मा दर्जा दिइन्छ र प्रयोगकर्ताको अनुरोधको एक सीधा र छोटो उत्तर समावेश गर्दछ। त्यसकारण, हामीले चित्रित स्निपेट्स अनुकूलन गर्न कार्य गर्न आवश्यक छ। यस बाहेक, यी ब्लकहरूबाट, आवाज एल्गोरिदमले %०% केसहरूमा प्रतिक्रियाहरू तान्दछ।
उत्तरहरूको साथ ब्लकमा कसरी पुग्ने:
कुराकानीत्मक सामग्रीहरू सिर्जना गर्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, र तिनीहरूलाई उत्तर दिनुहोस्।
उपशीर्षकहरूको साथ पाठलाई छोटो, सजिलैसँग पढ्न सकिने अनुच्छेदहरूमा राख्नु उत्तम हो।
शीर्षकसँग सम्बन्धित विषयहरू सम्बन्धित विकास गर्नुहोस्।
बुलेटेड सूची, तालिकाहरू, भागहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
स्थानीय खोज अप्टिमाइजेसन आवाज खोजीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। करीव आधा आवाज खोजी प्रश्नहरूको कडा स्थानीय आशय। "गुगल, मेरो नजिकै के रेस्टुरेन्टहरू मध्यरात सम्म खुला छन्?" स्थानीय अभिप्रायको साथ एक विशिष्ट भ्वाइस क्वेरी हो। यसको मतलब भ्वाइस खोजी स्थानीय साना व्यवसायहरुलाई बढावा दिनका लागि उपयुक्त छ।
सबै प्रस्तावित फिल्डहरू भर्दै तपाईंको कम्पनीको ड्यासबोर्ड अप्टिमाइज गर्नुहोस्। Google ले खोजी परिणामको रूपमा छनौट गर्‍यो भने तपाइँको गुगल मेरो व्यापार कार्डमा जानकारीको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
गुगल मेरो व्यवसाय मा समारोह ध्यान दिनुहोस् - "प्रश्न र उत्तर"। यो सेक्सन अक्सर खाली छोडिन्छ, तर यसले आवाज खोजीमा प्रभाव पार्न सक्दछ किनकि यसले ठूलो उपयोगकर्ता अनुभव सिर्जना गर्दछ। यहाँ प्रयोगकर्ताले जवाफ फेला पार्छ र खोज परिणामबाट सीधा ब्यापार र सेवाहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी जान्छ।
स्थानीय पदोन्नतिको अन्य विधिहरू कार्य गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, स्थानीय डाइरेक्टरीहरू वा स्थानीय मिडियाबाट ब्याकलिंक्समा दर्ता।
१२. सामाजिक नेटवर्कमा लोकप्रियता
होइन, सामाजिक संकेतहरू आवाज सहायकहरूको लागि श्रेणीकरण कारक होइन। यो कुरा तथ्यको बारेमा हो कि लोकप्रिय आकर्षक सामग्री भ्वाइस खोजी परिणामहरूको गठनमा प्राथमिकता हुनेछ। स्थिति डोमेनको लिंक मासको जस्तै हो - कृत्रिम बुद्धिले आधिकारिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसकारण, औसतमा, आवाज सहायकले सामग्री चयन गर्दछ जुन एक हजार भन्दा बढी फेसबुक सेयरहरू र करीव 45 45 ट्वीटहरू छन्।
भ्वाइस खोजी द्वारा सफल रैंकिंग साइटमा ग्यारेन्टी गरिएको छ जुन नियमित खोज परिणामहरूको शीर्ष १० मा छन्। त्यसकारण, मुख्य लक्ष्य भनेको उच्च पदहरू प्राप्त गर्न साइटलाई अनुकूलन गर्नु हो।
र फेरि सिफारिसहरूमा:
गुगल भ्वाईस खोजीको लागि कसरी तपाईंको साइट अप्टिमाइज गर्ने?
प्राविधिक समस्याहरू हटाउनुहोस्।
वेबसाइट लोड हुँदैछ।
साइट सुरक्षित बनाउनुहोस्।
आधिकारिक ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
संरचित डाटा मार्क गर्नुहोस्।
पढ्न सजिलो टेक्स्ट लेख्नुहोस्।
तपाईको साइटलाई स्थानीय रूपमा पदोन्नति गर्नुहोस्।
एक आला विशेषज्ञ बन्नुहोस्।
आजकल, एक कम्पनी को विकास सम्भव छ एक वेबसाइट को लागी धन्यवाद। यसैले, तपाईका गतिविधिहरू धेरै देख्नका लागि तपाईले आफ्नो वेबसाइटको सन्दर्भमा भर पर्नु पर्छ। तसर्थ, यो आवाज खोजी जस्ता नयाँ ट्रेंडी विधिहरू प्रयोग गर्नका लागि पहिलो व्यक्तिहरूमाझ तपाईं लाभदायक छ।
यो स्पष्ट छ कि एसईओ ज्यादातर हिस्सा तकनीकी काम को लागी हो। तपाईको वेबसाइटलाई राम्रोसँग प्रचार गर्नका लागि, म सुझाव दिन्छु कि तपाई जस्तो सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् Semalt जसले तपाईंलाई एक अद्वितीय एसईओ समाधान प्रस्ताव गर्दछ।
Semalt सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाईले चाँडै नै तपाईले चाहानु हुने परिणामहरू लिने विकल्प लिनुहुन्छ र यसको सबै भन्दा माथि फाइदा लिनुहुन्छ व्यावसायिक सेवा र निरन्तर अनुगमन।